Inona no tokony hatao mba ho sambatra ny fiarahana? - Informations et Actualités sur Madagascar
Santé Société Inona no tokony hatao mba ho sambatra ny fiarahana?
Inona no tokony hatao mba ho sambatra ny fiarahana?
by Alpha world on 22 h 49 in Santé, Société
Tsy mora ary tena mitaky ezaka ny fitadiavana ny fahasambarana eo amin'ny mpifankatia, indrindra rehefa manjaka ny fahazarana.
Hasarotam-piaro, tsy fahafaham-po, fahatsiarovana fa toa mihen-danja ny fitiavan'ny ankilany . . .
Samy mifamahofaho ao an-doha ao ireo mandritra ny fiarahana. Betsaka sy mifangaro ny fihetsem-po rehefa misy ny fitiavana. Sarotra ny mandrindra io fihetseham-po io kanefa tsy maintsy
arindra izany mba haharitra ny fifankatiavana. Ilaina ny fifampikasohana sy ny fiarahana mba hanamafy ny fifandraisana. Fa na iray ihany aza ny fon'ny mpifankatia, eo ihany ny loha roa misaina sy ny fomba fijery samy hafa. Vatana roa samy manana ny filany sy izay kendreny ka mitarika fikitranana indraindray.
Mba hampirindra ny fiarahana, ezaho hatrany ny manaja ireto manaraka ireto:
- Ny fifanakalozan-kevitra:
Mifampiresaka, mifampihaino, saina mivelatra amin'ny hevitra rehetra, tsy mitsara avy hatrany na mihinana am-bolony. Aza avela hipetraka ny fahanginana fa ifampizarao hatrany izay rehetra hitanao ho manan-danja sy mahatsara ny fiananareo, aza sasatra ny mitady ny marimaritra iraisana.
- Ny fifampikasohana:
Asio hatrany ny fifampikasohana ary aza avela ho faty ny afom-pitia. Ataovy toa an'ilay tany am-boalohany ireny, vao mainka hifakanhita ary tsy te hisaraka . . . Anokany fotoana hiarahana amin'ny malalanao fa aza avela ho safotry ny adidy sy ny zavatra hafa ny fitiavanareo roa.
- Mifanohana hatrany:
Na inona hevitrao momba izany, aza mitsara fa tohano hatrany izay tanjona sy zava-kendren'ilay tianao. Nofiny, tanjony ary faniriany ireny fa tsy anao, ary samy manana ny azy ny tsirairay. Ampaherezo sy ampio hatrany (na ara-batana na ara-tsaina) izy mba hahatontosa ny faniriany. Mahasambatra ny mahita ny fahambaran'ilay tianao rehefa mahatojo izay tanjona nokendreny izy. Aza misalasala ny mankasitraka sy mandoka azy amin'izay zava-bitany.
Ho mora sy ho mamy ny fiarahana raha voahaja ireo dingana ireo.
By Alpha world at 22 h 49